सफल हुनको लागी अवसरलाई चिन्नुहोस् — Motivatenews.Com
काठमाडौं – सफल हुनको लागी अवसरलाई पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ, अवसर जहिले पनि हाम्रो वरिपरी नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ यसले ढोकामा आएर ढकढक गर्दछ तर हामीले त्यसलाई हल्लाको रुपमा लिन्छौं अनि असफल हुन्छौं ।
एकपटक अफ्रिकाको जंगल नजिकै सानो गाउँमा एउटा किसान बस्दथ्यो । उसको नाम हाजिफ थियो । ऊ अत्यन्त खशी थियो । एकपटक उसको घरमा एउटा मान्छे आएर उसलाई हिरा को बारेमा केही कुरा भन्यो । उसले हाजिफलाई भन्या ‘यदि तिमीसँग एउटा औंलाको आकार जति हीरा भयो भने तिमीले एउटा पूरै देश किन्न सक्छौं ।’ यति भनेर त्यो मान्छे हाजिफको घरबाट गयो । आज सम्म खुशी तथा सन्तुष्ट तरिकाले दिन बिताएको हाजीफलाई अब चिन्ता पर्न शुरु भयो । चिन्ता पनि के को बारेमा भने हिरा को बारेमा ।
उसलाई रातभरि निन्द्रा लागेन । दिनमा पनि काम गर्न मन लागेन । त्यसपछि उसले आफूसँग भएको खोली खेत बेचेर हीराको खोजीमा हिड्यो । हीराको खोजीमा उसले सारा ठाँउ सक्यो उसले अफ्रिका र यूरोपका सम्पूर्ण ठाँउहरुमा हिरा खोज्यो । तर कहीँ पनि पाउन सकेन । ऊ अति निरास भयो । ऊ हिरा खोज्दा खोज्दै गल्यो , थाक्यो , कमजोर भयो । तर उसले हिरा खोज्न भने साहस भने छोडेन । अन्तिममा ऊ स्पेन पुग्यो स्पेन भरी हिरा खोेज्यो तर भेटाएन । हिरा नभेटिएपछि उसले त्यही स्पेनको बारसेलोना नाम गरेको नदीमा हाम फालेर आत्माहत्या गर्यो ।
यता उसको घरमा जसले उसको खोली खेत किनेको थियो । उसले आफ्नो उँटलाइ खोलामा पानी खुवाउदै थियो उसको नाम नाजिफ थियो । अचानक उसले खोलाको किनारमा एउटा ढुङ्गो टलक्क टल्किएको देख्योे । प्रायः बिहानको नयाँ सूर्यको किरणमा त्यो खोलीखेतमा प्रशस्तै ढुङ्गाहरु टल्कन्थे । नाजिफले चमक्क चम्किएको एउटा ढुङगालाई आफ्नो कोठामा लगेर राख्ने विचार गर्यो । किनभने यसले उसको कोठाको शोभा बढाउँदथ्यो । त्यसपछि नाजीफले एउटा टल्कने ढुङ्गालाई लगेर आफ्नो कोठामा राख्यो । त्यही दिन दिउँसा एउटा मान्छे नाजीफको घरमा आयो ।त्यो मान्छे हाजीफलाई हिराको महत्व बताउने मान्छे थियो उसले ढुङ्गा टलक्क चम्किएको देख्यो । उसले नाजीफ सँग सोध्यो– ‘हाजिफले हिरा खोजेर ल्याए कि कसो ? कोठामा त हिरा छ ? नाजीफले भन्यो किन र हजुर ? त्यो मान्छेले भन्यो किनभने त्यो हीरा हो । ‘मैले हीरा देखे भने चिन्न सक्छु ।’ नाजीफले उसको कुरा काट्दै भन्यो ‘होइन हजुर यो त मैले खोली खेतबाट ल्याएको ढुङा हो । यस्ता ढुङगा खोली खेतमा अरु पनि धेरै छन् । म सँगै आउनुहोस् मैले हजुरलाई पनि देखाइदिन्छु । तिनीहरु सँगै गए र केही ढुङ्गाहरु टिपे अनि त्यसलाई हीरा हो कि होइन भनेर जाँच्न लगे । वास्तवमा ती ढुङ्गा हिराहरु हिरै हिरा भएको कुरा थाहा पायो ।
यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौ ? एकछिन सोचौं । ल त्यसो भए तपाई के सिक्नुभयो ? आफैले विचार गर्नुहोस् ।
अत ः बुद्दिले काम गर्नुस्, तपाईले एकैपटक ठूलो जागीर खोज्नु भएको छ, यहि तपाईको गल्ती हो, अहिले तपाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट,जस्तो काम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यहीँ कामबाट, इमान्दारीसँग काम शुरु गर्नुस्, ्त्यो काम गर्दा गर्दै ठूलो काम पनि विचार गर्दै गर्नुस् यसो गर्नाले त्यही सानो कामले नै तपाईलाई ठूलो जागीरको बाटो देखाइदिन्छ , किनभने ४० तला माथी चढ्नु छ भने शरुमा पहिलो तल्ला नै चढ्नु पर्दछ । अतःआधार बिनाको माथिल्लो सोच नबनाउनुहोस् ।